Noesorin’ny Akademian’ny Zavakanto Sy Siansa Ao Makedonia Ny Filazàna Ny Trosam-panjakana Taorian’ny Fanerena Ara-politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Mey 2016 2:24 GMT
Dikasarin'ilay fampiasa an'ilay vohikala nesorina, nampiseho ny trosam-panjakàn'i Makedonia.
Andro vitsy monja taorian'ny nandefasany azy, nesorin'ny Akademia Makedoniana ho an'ny Zavakanto sy ny Siansa, ivontoeran'ny anjerimanontolo sy fampianarana zavakanto ambony indrindra ao amin'ny firenena, ilay fampiasa an'ilay vohikala manara-maso ny trosam-panjakana, taorian'ny fingapingan'ny antoko eo amin'ny fitondràna, VMRO-DPMNE.
NY 14 Martsa 2016, namoaka ny fanisàna ny Trosam-bahoaka ny Akademia Makedoniana ho an'ny Zavakanto sy Siansa (MANU), nampiseho ara-potoana ny tentin'ny trosam-panjakana Makedoniana — maherin'ny 4,23 lavitrisa euros, miainga avy amin'ireo angondrakitra avy amin'ny Banky Iraisampirenena sy ny Minisiteran'ny Fitantanambola. Ankoatra ny tontalin'ny trosa, mampiseho ny tahan'ny zanabola isantaona (3.3%) ihany koa ilay fitaovana, ary ny angondrakitra toy ny zanabola isan'andro (381.968 euros), trosa ho an'ny olompirenena tsirairay avy (2.088 euros) ary hoe mitentina 49,18% amin'ny PIB (harinkarena faobe) ilay trosa.
Nankalaza ilay fitaovana ho dingana fandrosoana ho an'ilay ivontoerana ireo media tsy miankina sy mpampiasa media sosialy maro, ivontoerana izay nangina mikasika ireo olana maro mitaky hamehana, izay niantraika tamin'ny firenena nandritra ireo 10 taona lasa farany.
Kanefa, ny ampitson'io, namoaka fanambaràna ny VMRO-DPMNE, nanohitra ny MANU, nikendry manokana an'i Taki Fiti filohany, mpahay toekarena malaza. Nametraka fihambahambàna tamin'ny fahamarinany ilay fanambaràn'ilay antoko, ary niampanga azy ho minamana amin'ny mpanohitra sy ny “Soros” — anondroana ilay mpandraharaha malaza George Soros, izay filohan'ny “Open Society Foundation, iray amin'ireo mpanohana ara-bola ny Global Voices.
Nanambara ihany koa io fa “hetsika ara-politika” ny famoahan'ny MANU ireny rehetra ireny, ary nitsikera ny fampisehoan'ilay fitaovana ny trosa amin'ny vola euros daholo (na dia tafiditra tamin'izany koa aza ny trosa mifandray amin'ny harinkarena faobe): “Samy mahalala daholo ireo mpianatra ara-toekarena rehetra fa tokony refesina amin'ny lanjany “eo ho eo” ny trosa, fa tsy ny tena izy, fa toa misitery ihany ho an'ilay minisitry ny fitantanambola tsy nahomby teo aloha, Taki Fiti, ireo toe-javatra ireo…”
Ora maro talohan'ny namoahana ilay fanambaràna, noesorin'ny MANU ilay fitaovana, fa amin'izao fotoana anoratantsika ity lahatsoratra ity izao, mitazona dika mitovy an'ilay pejy ny “Google Cache”.
Nitohy nandritra ny andro maro ny fanafihana ampiasàna ny fikitikitihana ny fihetsehampon'ny olona natao tamin'i Fiti. Namoaka valiny ny MANU niampanga mpiasa iray ho namoaka ilay fampiasa anefa tsy nahazo alàlana mialoha:
Nomanina tao amin'ny Ivotoerana MANU ho an'ny Siansa Informatika sy Teknolojian'ny Fampitambaovao [ilay fanisàna] ho an'ny filàn'izy ireo amin'ny fikarohany, ary navoakan'ny mpiara-miombona antoka iray ao amin'ilay ivontoerana kanefa tsy nilaza mialoha tamin'ny mpitantana ny MANU ary ny talen'ny ivontoerana akory.
Noho izany, tsy milaza ny toerana ofisialin'ny MANU ilay fanisàna.
Mbola mijanona misokatra ho amin'ny fampahafantarana ny amin'ny asan'izy ireo amin'ny vahoaka ny akademia sy ireo mpikambana tsirairay avy ao aminy
Amin'ny maha-mpikambana azy ao amin'ny Fifanarahana Governemanta Misokatra, nanome toky “ny hivoatra hatrany miainga amin'ny fototry ny ivontoeran'ny governemanta misokatra, mangarahara ary azo itokisana sy mahomby izay miserasera sy mifampiraharaha amin'ireo olompirenena” i Makedonia. Kanefa, matetika miatrika olana avy amin'ireo ivontoerana ny fandefasana angondraikitra misokatra rehefa miresaka lohahevitra tsy azo resahana, izay mety manaratsy ny sarin'ny fivoaran'ny toekarena hindrahindrain'ny antoko eo amn'ny fitondràna.
Fanavaozana famaritana ny trosam-bahoaka mahatonga resabe
Resaka iray mahamay ny olan'ny trosam-panjakana any Makedonia, iray amin'ireo firenena mahantra indrindra ao Eorôpa. Maro amin'ireo Makedoniana no tsy faly amin'ny fandaharan'ny governemantany ny fandaniana ataony, raha jerena ny fahambanian'ny kalitaon'ireo tolotra ho an'ny vahoaka miohatra amin'ny tokony ho izy, indrindra amin'ny sehatry ny fahasalamàna.
Eo ankilany, an-tapitrisany no laniana amin'ireo tetikasa izay mbola azo iadiana hevitra ny filàn'ny vahoaka azy. Ohatra, ao Skopje renivohitra, nanamboatra tranobe miendrika sambo misy voaly ny governemanta (na tsy ho afaka entina an-dranomasina mihitsy aza, ary any amin'ny maherin'ny 240 kilometrana lavitra eo ny ranomasina akaiky indrindra) ary kodiarana lehibe Ferris iray, ao ankoatra ‘ireo tranobe samihafa miisa 136 ary tsangambato natsangana ho ampahany amin'ilay tetikasa miteraka resabe ho fanatsaràna ny tanàna natomboka ny taona 2010. Nitentina 634 tapitrisa euros ny fanamboarana, izay naloan'ireo mpandoa hetra ao amin'ny firenena, araka ny Tambajotran’ ireo Mpitatibaovao Mpanadihady ao Balkan.
Notapahana ny herinaratra tany amin'ireo sekoly sasany satria tsy afaka nandoa an'io izy ireo…
Woohoo! tena mahafinaritra! Hanamboatra kodiarana lehibe Ferris izy ireo!
Moa izao hitondra ireo eo amin'ny fahefana mba hamerina hijery ireo tetikasa mahazo famatsiam-bola? Tsy mbola ampy tsara. Vao maika aza ny parliemanta Makedoniana nifidy ny hanova ny famaritana ny trosam-panjakana ao amin'ny firenena, tamin'ny fivoriana maika ny 23 Jolay 2014. Noho izany, karazany maro amin'ny atao hoe trosam-panjakana hatrizay, sahala amin'ny trosa avy amin'ny kaominina sy ireo orinasam-panjakana tantanan'ny fanjakana, no natao ho toy ny tsy misy intsony, raha tsy hoe angaha ny fanjakana no miantoka io lazaina ho trosa io.
Tamin'izany fotoana izany, nilaza mivantana ny tsy fankasitrahany i @EStavrevska mpampiasa Twitter :
Hovain'izy ireo ny famaritana ny trosam-panjakana mba hahatonga io ho toy ny hoe kely noho ny teo aloha. Ny zavatra hitako ho ataon'ireo manaraka dia ny hanovàny ny famaritana ny hoe vendrana, ary esoriny ao amin'izany izy ireo.
Resaka hafa iray indray koa ny famatsiam-bola avy any ivelany. Ireo mpitsikera ny governamanta, tafiditra amin'izany ny mpanohitra, ary ihany koa ireo mpamakafaka sy mpitoraka bilaogy, samy miahiahy hoe maro amin'ireo ezaka nandaniam-bola be nataon'ny governemanta no vao mainka lasa miha-vatsian'ireo fampindramam-bola avy any ivelany, izay tafiditra ao amin'ilay famaritana nasiam-panovàna ny trosa-panjakana.
Taorian'ny 2009, nitsahatra ny namoaka karazana angon-drakitra tena ilaina amin'ny fampiroboroboana ny firenena ny governemanta, tafiditra amin'izany ny habetsaky ny trosam-panjakana — eo ankilany niezaka ny famaritana azy tamin'ny taona 2014. Nampitandrina ny mpanohitra ara-politika fa raha tsy misy fiovàna ny toe-javatra amin'izao, mety ho lasa toekarena ratsy dia ratsy any Gresy i Makedonia.